ဘုန်းကျော်: 09/01/2010 - 10/01/2010
NCUB အတွင်းရေးမှုး-၂ ဦးမြင့်သိန်းအား ဖာခေါင်းကြီးဟု ဝေဖန်ခံရ
မဲ့ဆောက်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများမှ ဦးမြင့်သိန်း (NCUB အတွင်းရေးမှုး-၂ )၏အကျင့်စာရိတ္တ နှင့်ပက်သက်၍ ဝေဖန်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဦးမြင့်သိန်းသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ(NLD-LA) မှ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ နေများကောင်စီ(BLC)၏ရှေ့ နေ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ (NCUB)၏ အတွင်းရေးမှုး (၂)နှင့် FTUB ဟုခေါ်သည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တွင် တာဝန်ယူလျှက်ရှိသည်။
အမည်မဖော်လိုတဲ့ BLC မှ မိန်းမငယ်တစ်ယောက်က ဦးမြင့်သိန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး-
"ကျမကို သူ့ရုံးမှာ ဟိုနိုက်ဒီနိုက်လုပ်တယ်။ သူ့လက်က အတော့ကိုသရမ်းတယ်။ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘူး"
ယခုလို ပြောသွားသည့်မိန်းခလေးသည် ဒုက္ခသည်စခန်းတခုတွင် ခိုလှုံနေသည်။ ထို့အပြင် ယခုကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍
"ဦးမြင့်သိန်းက ဖာခေါင်းကြီး။ ဖာခေါင်းထက်ဆိုးတယ်"
BLC မှ ၀န်ထမ်းများမှပြောသည်။
ဦးမြင့်သိန်း(အသက် ၅၅) သည် ဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့ နေတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်မိန်းမနှင့် ခလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ပြည်ပအခြေစိုက်အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ဒီလို စိတ်ဓာတ်နှင့် လုပ်ရပ်ရှိသည့် ဦးမြင့်သိန်းအား မဲ့ဆောက်အခြေစိုက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မှာ ဘီအယ်စီ ကလုပ်တဲ့ အကယ်ဒမီ သင်တန်းကျောင်းမှာ မြင့်သိန်းက သူ့ တူမ မိုးမိုးဆိုသူကို ကျောင်းအပ်တယ်။ တူမဆိုတာ အင်,တူမပေါ့။ ကောင်မလေးက ပထမ ကြည်နေချိန် အသံမထွက်ဘူး မြင့်သိန်းကအကယ်ဒမီ ကျောင်းသင်တန်းပြီးချိန် ၅-နာရီဝန်းကျင်သွားခေါ်ပြီး ကိုးနာရီ(ည) အရောက်ပြန်ပို့ တယ်။ ညားနေတာထက် ၀ါးနေတာပေါ့ဗျာ။
နောက် ကျတော့ ကောင်မလေးကရိုးတော့ ဖြူဖြူလှိုင် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေး (အသက် ၂၀-ကျော်)
လေးကိုတူမဆိုပြီး ခေါ်လာပြန်ရော။ ကလေးမတွေ က ငယ်တော့ နှစ်ပင်လိမ်ဖို့ ခက်တယ်။ ခက်တော့ မိုးမိုးကို အကယ်ဒမီက ထုတ်ပြီးမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ လိုက်တယ်။ ခု မိုးမိုးက ဗိုက်ပါသွားတယ် လို့ သတင်းထပ်ကြားတယ်။
မျက်မြင်တွေ က တအားပဲ။ ညဆို ကလေးမတွေ နဲ့ ပဲ စူပါမားကပ်တွေမှာတွေ့ တယ်။
ကလေးမဆိုတာ သူ့သမီးသာသာပေါ့။ သူ့မိန်းမရဲ့ တူမအရင်းတွေ တော့ရှိတယ် သူမထိရဲဘူး။
သူ က ခု NLD က အမျိုးသမီး အလုပ်လုပ်တဲ့ ဝေေ၀လှိုင် ကိုဈေးကခေါ်လာတယ် (ဝေေ၀လှိုင်ဆိုသူက ချဲနဲ့ ပြေးခဲ့တာ) ခေါ်လာပြီးသူက ၀ါးလိုက်တယ် ၃-လလောက်အားရတာနဲ့ ပြန်ခိုင်းလို့ မရတော့ သူ့ ကို ပါတီ (NLD-LA)ထဲ ဆွဲထည့်တယ်။ ဒီလို ကောင်မလေးတွေအဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ အများကြီး။ ဦးမြင့်သိန်းမိန်းမက အော်စီမှာ သမီးလေးတစ်ယောက်နဲ့ ၊ သားက အမေရိကားမှာ။သူ့ သားသမီးရင်း ၂-ယောက်ပဲရှိတယ်။ သားကသူ့ အဖေကို လုံးဝမကြည်ဖြူဘူး။ အဖေ့စရိုက်ကိုရှက်လို့ ။
နောက်ပြီး ၀င်းဝင်းဆိုသူကို တူမအနေနဲ့ပဲ ခေါ်လာပြီး အဲလိုပဲ, အား, ရတော့ အမေရိကန်ကအသက်ကြီးကြီးတစ်ယောက် လက်ထဲထိုးအပ်လိုက်တယ်။ ၀င်းဝင်းက ဘီအယ်စီ မှာ သတင်းတာဝန်လုပ်နေတယ်။ အလုပ်သမားထဲ က စန္ဒာ ဆိုသူကိုလည်း အိပ် --စားလုပ်တယ်။
ဘိုကြည်မကောင်းသလို ဒီလူတွေက ပိုဆိုးတယ်။ တော်လှန်ရေးခုတုံးလုပ်ပြီး၊မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုဖျက်နေတာဗျ။
မှတ်ချက်။ ။ BLC မှ အတွင်းသိများကိုယ်စား ဘုန်းကျော်(လူ့ဘောင်ချစ်) ကိုယ်စားပြောပေးသည်။
လူက ငွေနောက်လိုက်ရင် လူမဟုတ်တော့ဘူး...။
ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုလို့ နာမည်တပ်မယ်။ အထူးသဖြင့် မညီမျှမှုပေါ့။ ငွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မြင်တယ်။ ငွေဆိုတာ ဘာလဲ။ ကြားခံပစ္စည်းပါ။
နေရာတိုင်းမညီမျှမှု့ ရှိတယ်။ လောကကြီးမှာ မညီမျှတာတော့ရှိမှာပဲ။ ဥပမာ ငပျင်း နဲ့ အလုပ်လုပ်သူ။ ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီး ညီမျှနိုင်မလဲ။ ငပျင်းက ဆင်းရဲမယ်။ အလုပ်လုပ်သူက စားနိုင်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်သူက ချမ်းသာမယ်။ ငွေရှိမယ်။ တခါတလေ မကိုက်ရင် ဆင်းရဲမယ်။ ဒါကို လူတိုင်းသဘောတူနိုင်တဲ့အချက်။
သို့သော်...မြန်မာပြည်က အခြေအနေက အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟာမှုက အတော်ကြီး ကြီးတယ်။ ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့ မတရားပဲနဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု ပြင်းထန်တယ်။ ဥပမာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ချမ်းသာတယ်။ သူတို့လစာနဲ့ ချမ်းသာတာလား။ မဟုတ်ဘူး။ ဆင်းရဲတဲ့လူကိုကြည့်အုံး။ ဥပမာ ထောက်ကြံ့မှာ ရှိတဲ့ ဒေ၀ူးစက်ရုံက အလုပ်သမားတစ်ယောက်က နေ့တိုင်း ဘဲဥကြော်နဲ့ ထမင်းစားပြီးအသက်ရှင်ရတယ်။
သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုဆိုတာက ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပြင်းထန်တယ်။ စီးပွားရေသမားတွေငွေနဲ့ရင်းလို့ ငွေပြန်ရတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုလည်းရှိတော့ ငွေရှိတဲ့လူက ငွေမရှိတဲ့လို အနိုင်ကျင့်လိုမရဘူး။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကတော့ အဲလိုမဟုတ်။ လူကို လူက အနိုင်ကျင့်တယ်။ ငွေမဲ့ကို ငွေရှိတဲ့လူက မတရားတာလုပ်တယ်။ မသိစိတ်ကကို လုပ်နေတာကို မြင်တယ်။ ဒါက ထုံးစံလိုဖြစ်နေတယ်။
ဒါက ဒီအခြေအနေက ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ကျွန်စနစ်ကို ပြန်သွားတဲ့တိုင်းပြည်လို့ပြတယ်။ ကျွန်တွေကလည်း သခင်တွေ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်တယ်။ မတရားတာ တရားတာ မစဉ်းစားဘူး။ ငွေရရင် ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူစားတွေလို ဖြစ်နေတယ်။
ဆိုတော့ ကျုပ်တို့လူမျိုးဟာ ခေါင်းမရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေပြီ။ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်နေကြပြီ။
လူတိုင်း ဇိမ်ခံချင်တယ်။ ချမ်းသာချင်တယ်။ ဇိမ်ခံတာ ချမ်းသာချင်တာကိုအပြစ်မပြောဘူး။ လူကိုလူလို သဘောမထားပဲ ဇိမ်ခံတာက အပြစ်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ဆင်းရဲသူတွေကို ချမ်းသာသူတွေ လူကိုမြင်းလို စီးတာမကောင်းဘူး။ ဒါက ဘာက ပြလဲဆိုတော့ လူကိုလူလို သဘောမထေားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြတယ်။ ဒါ လုပ်စရာလား။
ငွေမရှိတဲ့လူကလည်း ခေါင်းမရှိဘူး။ အနိုင်ကျင့်ခံရတာကို အနိုင်ကျင့်ခံတယ်လို့မမြင်ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုလိုဖြစ်နေတယ်။
အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ရှင်က ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်တာက နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ အမြတ်လိုချင်လို့စီးပွားရေးလုပ်တယ်။ အလုပ်သမားက ငွေလိုချင်လို့ အလုပ်လုပ်တယ်။ ငွေလိုချင်တာက လူတိုင်းပဲ။ တခုတော့ရှိတယ်။ တရားတာ မတရားတာကို ခေါင်းထဲထည့်ရမယ်။ ငွေရရင်ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိသူဟာ သွားပြီ။ လူနဲ့မတူတော့ဘူး တိရဆန်လိုပဲ။ ခေါင်းမရှိတော့ဘူး။ ငွေကို လူကလုပ်တယ်။ ငွေက လူကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ငွေဆိုတာ စက္ကူပဲဖြစ်တယ်။ တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ Plastic နဲ့ လုပ်တယ်။ ငွေဆိုတာက ကြားခံပစ္စည်းပဲ။ လူ့ဘ၀မှာ လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သေချာစဉ်းစားကြပါအုံး။ ငွေရတိုင်းတော့ ဘာမဆို မလုပ်ကြပါနဲ့။
လူ့အဖွဲအစည်းမှာ မတရားတာတွေရှိမှာပဲ။ ဒါက ထုံးစံပဲ။ အဓိက အဲဒိ ထုံးစံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ပဲ။ ဥပမာ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားကို ငွေပေးပြီးခိုင်းတယ်။ ငွေရတိုင်း သူ့ခိုင်းတာကို ဘာမဆိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားတော့ပေါ့။
နောက်တခု ရှိသေးတယ်။ ခလေး ကိစ္စ။
မြန်မာလူမျိုးတွေ ခလေးကို ခိုင်းတယ်။ ခလေးစစ်သား ခလေးအလုပ်သမားရှိတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်မယ်ဆိုရင် ခလေးလည်း ခလေးလိုမမြင်ဘူး။ ကိုယ့်ခလေးလို သဘောထားရင် နင့်နင့်နာနာခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုတော့ တချို့ မြန်မာတွေဟာ ဘီလူးစိတ်ပေါက်နေလားမသိ။
အသက်ငယ်တဲ့ခလေးတွေအလုပ်လုပ်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း လုပ်တယ်။ ဒါက ပြသနာမရှိဘူး။ ရှိတာက ခလေးငယ်ငယ်တွေ မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီး ခိုင်းတဲ့ပြသနာပဲ။ ဒီကိစ္စကို မြန်မာလူမျိုးတွေ အလုပ်ဆုံးပဲ။ အမြင်မတော်တဲ့လူကလည်း အမြင်မတော်တာတွေကိုလက်ခံတယ်။ ဒါက ထုံးစံလို့ပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ့်သားသမီးကြတော့ ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းနေစေချင်တယ်။ သူများသားသမီးကြတော့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင် လူမဟုတ်တော့ဘူး။ တိရဆန်ပဲလုပ်တော့။ တောထဲမှာ တစ်ကောင်တည်း ကြိုက်သလိုသာနေ။
မြန်မာလူမျိုးဆိုတာက နှုးညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။ စာနာတက်တယ်။
သို့သော် မတရားတာကို တရားတယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ ထုံးစံကြီးက ခေါင်းထဲစွဲနေလို့ ဒီလိုခံနေရတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက လူကို လူလိုခံစားတက်တဲ့ နှလုံးသား၊ အမြင် ရှိကြပါလို့။ ငွေ,ဆိုတာက ကြားခံပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, September 22, 2010
ဒီနေ့ ခန့်စည်သူအကြောင်းကို တရားမ၀င်ကြားတယ်...။ Perth က ပွဲစီစဉ်သူကို ခန့်စည်သူက ဖုန်းဆက်ပြီးမေးလာတယ်။ သူလာရင် လုံခြုံမှု ရှိပါ့မလားလို့မေးတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော်ခန့်စည်သူကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကျနော့်ဘလော့ဂ်အတွက် အင်တာဗျူးလုပ်ချင်ပါတယ်။ သိတဲ့သူများဖြစ်နိုင်ရင် ဖုန်းနံပါတ်ပေးကြပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ၈၈-တုန်းက ခန့်စည်သူသည် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်သည်။ ဂျပန်မှာ ၁၀-နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဒါ့ကြောင့် ခန့်စည်သူသည် ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ကောင်းကောင်းသိနိုင်သည်။
ကဲ ရဲဘော်ဒို..သိတယ်ဟုတ်...ခန့်စည်သူ ဘာလဲဆိုတာကို...
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, September 21, 2010
ကဗျာရေးတာလည်း ၀ါသနာရှိပါတယ်။ ရှစ်တန်းနှစ်က ကဗျာတွေရေးဘူးတယ်။ ရေးပြီး အတန်းထဲကသူငယ်ချင်းတွေကို ပြ,တော့ သူတို့အားပေးတယ်။ ကျနော့်မှာ မွတ်စလင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုရေးမိပါတယ်။
ကူးလာ ကူးလာ ကုလားတို့မှာ
သူ့ရဲ့ စိတ်ကောင်းလို့ ကျနော်ဒီလိုရေးပေးပါတယ်။ သူတို့အသားကမဲတော့ တချို့ က လှောင်တယ်။ ကျနော်က သူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးပေးတော့ သူ..ပျော်သွားတယ်။ ပြီးတော့ နို့တခွက်တိုက်ပါတယ်။
တောထဲကို ရောက်တော့လည်း ရေးသေးတယ်။ မှတ်မိတဲ့ကဗျာလေးကို ပြောပြမယ်။
-စ်ဆုံးအောင် ပြု,အုံးမှောင်တဲ့ ည..။
ခေါင်းစဉ်တော့ မရှိဘူး။ ရေးပြီး ကိုဂင်ကြီး (ကိုထွန်းထွန်း)ကိုပြတော့ သူက အသံသြသြကြီးနဲ့ ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတယ်။
ကျနော့် ကဗျာတွေ မကောင်းဘူးလား?
ကျနော်နေတဲ့နေရာက Perth မြို့ ဆိုတော့ ကိုယ့်မြို့ အကြောင်းပဲရေးချင်ပါတယ်။ မြို့ လေးက ကမ်းခြေဘေးမှာတည်ထားတယ်။ ဘယ်နေရာကိုသွားသွား သဲသော်ပြင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရသလိုပဲ။ တခါမှ မြေကြီးမြေသားမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ Perth မြို့ ဆိုတာက သြစတျေးလျနိုင်ငံတခုလုံးမှာ အဓိက သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့နေရာ။ ၀င်ငွေကောင်းတယ်။ အလုပ်ပေါတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ အရှေ့ တောင်အာရှိနဲ့နီးတော့ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းတယ်။ မလေးရှားကိုသွားမလား၊ ဘန်ကောက်ကိုသွားမလား...ခရီးကနီးတော့ လေယျာဉ်ခဈေးမကြီးဘူး။
အပင်တွေကို သတိထားမိတယ်။ Perth မြို့ မှာရှိတဲ့ အပင်တွေအားလုံးက ထူးခြားတယ်။ အရွက်လေးတွေက အကြီးဆုံးတစ်လက်မတောင်မပြည့်ဘူး။ နေရာတိုင်း ခြုံပုတ်တွေချည်းပဲ။ ရာသီဥတုကြောင့် ဒီလို ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာ (Unique) ဖြစ်တယ်လို့စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ အကောင်တွေကလည်းထူးခြားတယ်။ ဥပမာ Kangaroo ကိုကြည့်။ သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ မောင် မောင်မင်းကြီးသားတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ Kangaroo မထင်ဘူး။ လူလည်းမကြောက်။ သေမှာလည်းမကြောက်။ ကားမောင်းတဲ့အခါဆိုရင် အရမ်းသတိထားရတယ်။ ကားကိုဝင်တိုက်တယ်။ အများစုသေတဲ့နေရာကတော့ တော, ဘက်ကြတဲ့မြို့ တွေမှာပေါ့။
နွေရာသီဆိုရင်တအားပူတယ်။ ဆောင်းတွင်းဆိုရင်တအားအေးတယ်။ ရေတော့မခဲဘူး။ မိုးတွင်းဆိုတာကလည်း မိုးအရမ်းမရွာဘူး။ တခါတလေ မိုးသီးတွေအရမ်းကြွေတယ်။ ပြီးခဲ့နှစ်လလောက်က မိုးသီးကြွေလို့ ကား, အတော်များများပျက်စီးကုန်တယ်။ မိုးသီးတစ်လုံးက ဂေါက်သီးလောက်ရှိတော့ ကားတွေဆိုရင် ပိန်လိမ်ကုန်တယ်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောကြတာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အရပ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ဥပမာ အဆိုးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ အနောက်တောင်ဘက် (South West Australia) မှာပိုပြီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တယ်။ လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀-လောက်ကတည်းက မိုးရွာတာနည်းတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ Elnino တို့ ဘာတို့ကြောင့်ပေါ့ဗျာ။ ဗမာလိုဆိုရင် အပူစီးကြောင်းရှိတဲ့အချိန်ပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် Perth မှာ ရေအရမ်းရှာပါတယ်။ သောက်ရေသုံးရေက မြေအောက်ရေကို အဓိကထားရတယ်။ သူတို့ရေကလည်း မြန်မာပြည်ကရေလိုမဟုတ်။ စေးကပ်ကပ်နဲ့ သောက်လို့မကောင်းဘူး။ ရေချိုးရင် ဂျီးတွန်းဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သြစီမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးနီးပါ ဂျေးများတယ်။
ဘယ်နေရာသွားသွား ကျုပ်တို့ရဲ့ လူမျိုးတွေကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကရင်တွေအများစုထင်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာကပြားတွေ။ ချင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ၉၀% ရာခိုင်နှုံးလောက်က ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ ရောက်လာကြတယ်။ မြန်မာတွေအားလုံးပေါင်းသုံးသောင်းနီးပါးလောက် ခန့်မှန်းခြေရှိမယ်ထင်တယ်။
မြန်မာတွေအများစုက စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ လုပ်ကြတယ်။ တချို့ မြန်မာတွေ ဆိုင်ဖွင့်တယ်။ တချို့ ကြတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်း။ မနက်မိုးလင်း ၆-နာရီကနေ ညနေ-မိုးချုပ်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ မြန်မာတိုင်းမှာ တိုက်တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ဝယ်နိုင်တယ်။ အကြွေးနဲ့ပေါ့။ အများစုက မိန်းမတစ်စီး၊ ယောက်ျားတစ်စီးရှိတယ်။ မရှိရင် ခလေးကျောင်းပို့တဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်တယ်။ ယောက်ျားက အလုပ်သွားတဲ့အခါဆိုရင် ဈေးသွားဈေးဝယ် ကားမရှိရင် ဒုက္ခရောက်တယ်။ Bus ကား၊ ရထားက အားကိုးလို့မရ။ ဆိုတော့ မြန်မာတွေတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိတယ်။ တချို့ ဆိုရင် တစ်အိမ်မှာ လေးငါးစီးတောင်ရှိတယ်။ သားတစ်စီး၊ သမီးတစ်စီးပေါ့။
မြန်မာတွေရဲ့ အိမ်တိုင်းမှာ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အ၀တ်လျှော်စက်၊ အင်တာနက်၊ ကွန်ပြူတာ၊ စတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်။ မြန်မာပြည်ကစကားနဲ့ပြောရရင် သူဌေးပေါ့။ ဌေးတယ်လို့လည်း မြန်မာတွေမခံစားရပါဘူး။ အဆင်တော့ပြေကြပါတယ်။
မြန်မာတွေအများစုက ခရာစ်ယာန်တွေများတယ်ထင်တယ်။ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းက ပိုင်တဲ့ခရာစ်ယန်ဘုရားကျောင်းမရှိဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကတော့သုံးကျောင်းရှိတယ်။ စုပေါင်းဝယ်စုပေါင်းလှူကြရင်း ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ လူနေအိမ်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းလုပ်ထားတာပါ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင် ကိုယ်တူရာစုပြီးသောက်ကြစားကြပွားကြ။ လူငယ်တွေကတော့ ဘောလုံးကန်၊ Night Club သွား၊ လူကြီးတွေကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းတက်။ မြန်မာတော်တော်များများကတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်မိသားစုနဲ့နေပြီး စားလိုက်အိပ်လိုက်လုပ်ကြတာများပါတယ်။
သြစတျေးလျကို မြန်တွေအထင်ကြီးလို့ လူနေမှုအဆင့်မြင့်လို့ လာကြတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ လူနေမှု့ အဆင့်တော့မြင့်ပါတယ်။ ချမ်းသာတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် မြန်မာတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့မရှိတော့ လူတိုင်းမပျော်ကြဘူး။ မြန်မာပြည်က ငပိ မစားရတော့ တခုခုလိုနေသလို။ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်၊ ပဒက်စာမတွေ့တော့ ထမင်းဝိုင်းမှာ ဟင်းချိုမဲ့သလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဟင်းချက်စရာတွေအကုန်လုံးနီးပါးက ရေခဲစိမ်တွေချည်းပဲ။ စိမ်ထားတာက ခဲ, တောင်နေတယ်။ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်က ဟာတွေလဲမသိဘူး။ စားရသောက်ရတာပေါ့ပျက်ပျက်။ ဘယ်လိုမှ မခံစားတက်ဘူး။ မပျော်လည်းတော်ရာမှ နေရဆိုသလို နေကြရတာပေါ့ဗျာ။ မတက်နိုင်ဘူး။ Perth ရဲ့ ရာသီဥတုက မြန်မာပြည်လိုဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့အပင်စိုက်,ပေါက်တယ်။ မြန်မာတွေအိမ်တိုင်းမှာ ချဉ်ပေါင်တော့ စိုက်ထားကြတယ်။ မစိုက်ရင် ဘယ်မှာဝယ်စားမလဲ။ တချို့ ကြတော့ စိုက်ပြီးရောင်းတယ်။ တပိုင်တနိုင်ပေါ့။
တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး အပန်းဖြေကြပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာပြည်က သင်္ကြန်ကိုပြန်တယ်။ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား-ထိုင်းကိုအလည်သွားတယ်။ ဒါကိုတော့ မြန်မာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားတာခုက မြန်မာတွေအားလုံး ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာနေချင်ကြတယ်။ သြစတျေးလျမှာနေတာကို ဂုဏ်မယူကြဘူး။ ချမ်းသာတယ်လို့လည်း ဖင်ခေါင်းမကျယ်ဘူး။ ဒါကိုတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့လို့ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဟေ့...ကိုလူငယ်တို့..လူကြီးတို့ ဒီလင့်ကို နားထောင်ပြီး ခံစားကြည့်ကြ။ ဒီမိုးဝေယံ ကို အထူးကျေးဇူးတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, September 17, 2010
ခန့်စည်သူကို သြစီက ဗီဇာပိတ်ရေးအတွက် စာပို့ကြတာကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စာပြန်လာပါတယ်။ ၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်လို့ ၀န်ကြီးအသစ်ဆီကို ဆက်လက်တင်ပြထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။ ခန့်စည်သူတော့ ထိပြီ။ မြန်မြန်ပီးအောင် များများထပ်ပို့ကြပါဗျို့ ....
From: Evans, Chris (Senator)
Date: Thu, Sep 16, 2010 at 1:46 PM
Subject: FW: Request Not to permitavisa for Khan Si Thu,afamous actor in Burma
Thank you for your email to Senator Chris Evans.
The Hon Chris Bowen MP is now the Minister for Immigration and Citizenship and your email has been forwarded to his office foraresponse as appropriate.
For your general enquiries regarding visa information, please telephone the Department of Immigration and Citizenship on 13 18 81.
Office of Senator Chris Evans
Perth မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၆-ရက်နေ့တွင် ခန့်စည်သူ ဦးဆောင်ပြီးအငြိမ့်ပွဲကပါမည်..။ မြစ်သာမြို့ (ပြည်တွင်း)မှာရှိတဲ့ မိဘမဲ့ခလေးများရံပုံငွေပွဲအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ပွဲစီစဉ်သူတွေကတော့ တောထဲကလာတဲ့သူပုန်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အပြင်..အရပ်သားတွေ၊ နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Perth မှာရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုကတော့ လုံးဝညီညွတ်ကြပါတယ်။ သပိတ်မှောက်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပွဲ..ပျက်အောင်လို့... သပိတ်မှောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ခန့်စည်သူကို ပညာပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အင်အားစုတွေအခုကတည်းက စတင်စည်ရုံးနေပါပြီ။ သြဂုတ်လ-၈ ရက်နေ့ ၈၈၈၈ လေးလုံးအခမ်းအနားတခု Perth မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီဝင် ကိုသိန်းလွင်(ABSDF ရဲဘော်ဟောင်း) က Perth ကို အာရုံဦးရဲ့ အနုပညာရှင်တွေလာရင် ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်ဖို့ကိစ္စကို တရားဝင်ကြေငြာထားပါတယ်။
Perth ကမြန်မာတွေအားလုံး ကျနော့်တို့ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်သိထားပါတယ်။ တချို့ ကတော့ အနုပညာရှင်တွေကို ဆန္ဒပြတာမကောင်းဘူးလို့၊ မသင့်တော်ဘူးလို့ပြောထားတာရှိပါတယ်။ တချို့ ကတော့ သဘောကြတယ်။ အမြင်မတူတာတော့ရှိတာပေါ့လေ။ မတက်နိုင်ဘူးဗျာ..။ ကျနော်တို့ အာရုံဦးရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကြီးကို Perth မှာ အာရုံဦးမတိုင်ခင် သေးထွက်စေရန်တုံးမောင်းခေါက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း...ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို ကြိုတင်တင်ပြပါရစေ..။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, September 13, 2010
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, September 10, 2010
အနုပညာရှင်များကို ဆန္ဒတော့ မပြချင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် တ၀ကြီးနမ်းပြစ်ချင်ပါတယ်။ ချောလည်းချော..လန်တာကလည်း ဖင်ပြောင်တဲ့အထိဆိုတော့ အသဲမှာ ယားကျိကျိ။ အသံကလည်းကောင်း..စကားပြောကလည်ချို..အသက်ကလည်း အများဆုံး ဒူးယားနှစ်ကာတွန့်ကျော်လောက်ပဲရှိအုံးမယ်..။ ဥပမာ- စော်လေး ၀ိုင်းစုပေါ့..။ ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲနော်။ သူ့ကိုဆန္ဒပြတာ မချစ်လို့မဟုတ်...အမေရိကမှာရှိတဲ့ ရဲဘော်မကြီးတကြီးတွေ၊ ရဲဘော်အိုကြီးတွေ၊ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေလည်း အားလုံးချစ်ကြမှာပဲ။ လူ့သဘာဝလေ...သိတယ်မဟုတ်လား။ ကျနော်လည်း ချစ်တက်တဲ့ နှလုံးရှိပါတယ်။
ကဲ...ဆန္ဒပြကြမယ်..။ တာဝန်သိ တော်လှန်ရေးသမားတွေက ဆန္ဒပြမယ်။ တချို့ မပြကြဘူး။
မပြတဲ့လူကတော့ ရှက်လို့ပေါ့..။ ထားတော့..။
ဘာ့ကြောင့် ပြ, တာလဲ။ အရှက်မရှိ ပုဆိုးလှန်ပြတာတော့မဟုတ်။ သဘောထား၊ ဆန္ဒကို အေးအေးချမ်းချမ်း တစ်နာရီလောက် ပြကြတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က သတိ,ပေးတဲ့သဘောပါ။ ဘယ်လိုသတိပေးချင်လဲဆိုတော့.....
ခင်ဗျားတို့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပရိတ်သတ်ကို ပြချင်တာပဲ။ ဒီလိုပြမှ စပွန်စာများများရမယ် မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့လည်း ခင်ဗျားတို့လို့ ပြချင်တာပေါ့..။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ မသေမချင်းမှတ်မှာ..ဟုတ်ဘူးလား။
"ခင်ဗျားတို့ အနုပညာရှင်တွေ စစ်အစိုးရခိုင်တိုင်းမလုပ်ပါနဲ့...ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ပြည်သူရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပါအုံး...။ အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းလို့ဆိုတဲ့ ဆင်ချေတွေ လက်တွေတော့မပေးပါနဲ့...။ အစိုးရက ဒီရုပ်ရှင်မှ မရိုက်ရင် ပဲခူးကဖြစ်ရပ်လို သေနတ်နဲ့ မသေမချင်းပစ်သတ်မယ်လို့လည်းမပြော...အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ပေါ့..။ အနုပညာ Permit ရုတ်မယ်လို့ပြောတာပဲရှိတယ်..။ ဒါကလည်း ပါးစပ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာပဲရှိတယ်...။ သတင်းစာထဲမှာ ကြေငြာတာတော့မဟုတ်။ ခင်ဗျားတို့ အာရုံဦးမှာ ဖူးတဲ့ကြာကို ရိုက်လို့ Income Tax 50 လျှော့မှာကို သဘောကြပြီးရိုက်တယ်..။ နအဖက မရိုက်ရင်ထောင်ထဲထည့်မယ်လို့လည်းမပြော..."
အာရုဏ်ဦးကို မရိုက်ရလည်း ခင်ဗျားတို့ ထမင်း မငတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ လုပ်လို့ ဘာမသိ..ညာမသိ တချို့ ပြည်သူတွေ ပေါက်ကရဖြစ်အုံးမယ်။ အဲဒိလူတွေက ထမင်းတောင်, ကန်စွန်းရွက်ကြော်နဲ့ ၀ါးနေရတယ်မဟုတ်လား။ အများစုကိုပြောတာပါ။
အင်္ဂလန်၊ အမေရိက၊ သြစီ နဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေအများစု ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေလို ကြောက်ပြီးတော့ ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ အားလုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြ,လို့ရတယ်။ ဖင်လန်ပြတာကို ပြောတာမဟုတ်။
သူလည်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ ခေါ်ပါလား..နောက်ပြီး ထောင်ထဲက ကိုဇာဂနာ...။ ဒါရိုက်တာတောင်လုပ်သေးတာပဲ။ သရုပ်ဆောင်တာတော့ သနားတယ။ ဘာ့ကြောင့်မခေါ်လဲ..။ မပြောတော့ဘူး။ ဘာ့ကြောင့် သူတို့ ဂရုမစိုက်လဲ..။ အာရုဏ်ဦးမှာ ပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေထက် အုံးနှောက်ကြီးလို့ပဲ။ စေတနာ...အနစ်နာ၊ အမှန်တရားသိလို့ပဲ။ သူတို့က ခင်ဗျားတို့ထက်တောင် ပိုပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းကို လုပ်ချင်အုံးမယ်။ သူတို့ဂွင်မှာ သူတို့လည်းဆရာကြီးတွေပဲ..။ အကယ်ဒမီတောင်ရပြီးသား။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
အဓိကပြောချင်တာက ခင်ဗျား...အနုပညာရှင်တွေကို ပညာနည်းနည်းပေးချင်လို့...တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာတွေ ဆန္ဒပြတာပဲ..။ မုန်းလို့မဟုတ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်။
ဆန္ဒပြဖို့ တားမြစ်တဲ့လူ၊ စပွန်စာပေးတဲ့လူများအကြောင်း...
အရင်ဦးဆုံး စပွန်စာပေးပြီးခေါ်တဲ့လူတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောပါရစေ။ အပြင်လူကခေါ်တာ ပြသနာမရှိဘူး။ တော်လှန်ရေးသမားတွေခေါ်တာဆိုရင်တော့ ဒီလူတွေ အုံးနှောက်မရှိလို့ပဲ..။ ကိုယ့်အကျိုးကလွဲရင် ဘာမှ မသိချင်လောက်အောင် နိုင်ငံရေးကင်းမဲ့နေလို့ပဲ..။ အကျိုးကတော့ အမြတ်ငွေဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သူဟာ, ဘာလဲ။ ရှင်းပြီ..အငြင်းမပွားနဲ့တော့။
တချို့ လူတွေက မသိလို့ခေါ်မိတာရှိတယ်။ ဥပမာ Perth မှာ ခန့်စည်သူပွဲ ရှိတယ်။ စီစဉ်သူက မသိလို့ခေါ်မိတယ်။ အရိုင်းကိုတော့ သိသိချင်း၊ ကျော်ထူးနဲ့ အစားထိုးတယ်။ ဒါက ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ ဒီလိုမျိုး အပြင်လူက သိသိချင်း ပြင်သေးတယ်။ မသိလို့ ခေါ်မိတာကို ၀န်ခံတယ်။ တော်လှန်ရေးသမားလို့ ဘွဲ့ခံပြီး လုပ်တဲ့လူကိုတော့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ မပြောတော့ဘူး။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အနုပညာရှင်တချို့  သူတို့အလုပ်ကို သူတို့လုပ်ခဲ့ပြီးပီ။ ကျနော်တို့ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ တခါတလေတော့ ဒီလိုလုပ်တာ နစ်နာစေချင်လို့မဟုတ်ပါ။ ကျနော့်အလုပ်က တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, September 07, 2010
အားလုံးသိပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုတင်ပြပါတယ်။ နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ သြစတျေးလျနိုင်ငံကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာ ဘာတွေလိုအပ်လဲ။ သြစီကဘယ်လောက်ခေါ်လဲဆိုတာကိုသိသလောက်တင်ပြပါ့မယ်။
သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ သြစတျေးလျနိုင်ငံ Immigration ၀န်ကြီး ဖြစ်တဲ့ ခရစ်အီဗင်ဆီကို ကျနော်စာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အဖေနဲ့အမေကို ဒုက္ခသည်စခန်းကနေသြစီရောက်ဖို့ ကျိုးစားနေတာ သုံးနှစ်နီးပါးရှိပါတော့မယ်။ သူတို့ UNHCR ကနေ ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်မပြုသေးပါဘူး။ ကြာလည်းကြာပီဆိုတော့ လိုရမယ်မယ်ရ ဘန်ကောက်က သြစီသံရုံးကိုလျှောက်လွှာပို့ခဲ့ပါတယ်။ ပို့ပြီး နှစ်လအကြာမှာတော့ သံရုံးက ကျနော့်အဖေရဲ့ လျှောက်လွှာကို လက်မခံကြောင်းအကြောင်းကြားစာရောက်လာပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း တင်း,ပြီး ဘာ့ကြောင့် အဲလိုလုပ်ရတာလဲဆိုပြီး ခရစ်အီဗင်ဆီကိုစာတစ်စောင်ရေးခဲ့ပါတယ်။ တခြားဝန်ကြီးတွေဆီကိုလည်း အချက်အလက်နဲ့ မိတ္တူပေးခဲ့ပါတယ်။ ၀န်ကြီးက ဘန်ကောက်သြစီသံရုံးကောင်ဆယ်လာကို လှမ်းပြီး ဘုန်းကျော်ဆီကို ငါ့ကိုယ်စားစာပြန်ရေးပါဆိုလို့ အောက်ပါအတိုင်းရေးလာပါတယ်။
စာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ အပြည့်အစုံဘာသာပြန်မနေတော့ပါဘူး။ အဓိကအချက်တွေကိုတင်ပြပါ့မယ်။
၁) ထိုင်းအစိုးရက ဒုက္ခသည်တစ်ယောက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရမှ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမခံရရင် တတိယနိုင်ငံတွေကို လုံးဝထွက်လို့မရပါ။
၂) ၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ်မှာ သြစီက ဒုက္ခသည်ဦးရေ သုံးသောင်းခွဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ၄၀၀၀ လောက်ပါတယ်။
၃) ဘယ်လောက်ပဲ သြစီသံရုံးက ငြင်းဆိုစာ(Refused Letter) ရရ၊ လျှောက်လွှာကို အချက်အလက်ပြန်ပြောင်းပြီး တင်နိုင်ပါကြောင်း၊ လက်ခံပါကြောင်း အကြောင်းကြားတယ်ပေါ့။
ထူးခြားတာတခုကတော့ သြစီသံရုံးကနေ စစ်မှုထောင်းဟောင်းတွေကို လုံးဝ သြစီကို အခြေချခွင့် ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ကျနော်အခု လော်ဘီလုပ်နေပါတယ်။ သြစီက ၀န်ကြီးတွေ၊ အရာရှိတွေ အထိရောက်အောင်တင်ပြနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေမှန်သမျှ ကျနော့်ဆီကို အကြောင်းကြားစေချင်ပါတယ်။
Dear Mr Kyaw
Thank you for your email dated 18 August 2010 to , concerningadecision made by the Australian Embassy Bangkok on your father’s humanitarian visa application. The Minister has asked me to respond on his behalf, as the matter you raised falls within my responsibilities as Minister Counsellor, Department of Immigration and Citizenship, East Asia region.
Unfortunately, the letter sent to Mr San Lwin, your father, care of you, did not fully detail the reasons for refusal. Your Australian citizenship is not in question and was notafactor in the decision made to refuse your father’s application. I apologise for any confusion the refusal letter may have caused, and am attachingarevised letter relating to your father’s application. Please disregard the previous letter.
I appreciate that you are concerned for your father and are disappointed that his refugee application was refused. I can assure you that full consideration was given to the claims put forward and that Mr San Lwin’s claims were comprehensively assessed by an experienced decision-maker.
Whenadecision is taken to refuseahumanitarian visa, it is because the decision-maker was not satisfied that the applicant had compelling reasons for the grant ofavisa. This does not mean that the claims of your father were not accepted or that the difficult circumstances he experienced were not acknowledged. This is inevitablyadifficult assessment to make given that many people are in very compelling circumstances.
It may assist to understand the visa decision if I give an overview of Australia’s Humanitarian Program and how people are selected to come to Australia on humanitarian grounds.
The Australian Government operatesaglobal and non-discriminatory Humanitarian Program. The Program is designed to assist those who are subject to persecution or substantial discrimination amounting toagross violation of their human rights in their home country and who demonstrate the greatest need of resettlement.
As you can appreciate, many more people apply to be resettled under the Humanitarian Program than Australia can accept. For example, in 2008–09 around 34 500 people were proposed under the Special Humanitarian Program (SHP) category and around4500 people were granted visas overseas. Most SHP applicants have close family in Australia and have suffered some form of discrimination or persecution, however, the limited number of visas available means that only those with the most compelling reasons for resettlement can be grantedavisa. Inevitablyalarge number of those who apply will be disappointed.
It is recognised that most applicants forahumanitarian visa are suffering some form of discrimination. However, given the limited number of visas available under the Humanitarian Program, every effort is made to assist those in greatest need of resettlement. The greatest priority is given to those people assessed as refugees by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and referred to Australia for resettlement, and applicants who are proposed by an immediate family member, such asaspouse or dependant child, in Australia.
I note that your father does not have official refugee status in Thailand. You may be aware that the Royal Thai government is responsible for granting this status to Burmese refugees in Thailand. The Royal Thai government has made it clear over the past few years that exit permission will not be granted to any refugees who do not have refugee status. Without this exit permission, it is simply impossible foraBurmese national such as your father, to be re-settled inathird country.
I understand that you wish to have your father’s application reviewed, however as the attached refusal letter states, this decision is not open to review or appeal. It is open for your father to re-apply at any time, and his application will be assessed against the various factors mentioned in this letter. Without pre-emptingadecision, any further application is not likely to be successful unless new information significantly adds to the claims already made. The refugee registration process and the issue of exit permission (as detailed in the paragraph above) are other factors to consider if your father decides to lodgeanew refugee application.
Further information on Australia’s Humanitarian and Migration Programs, including the application forms, is available on the Department’s website:
Minister - Counsellor (Immigration) a.i.
Acting Regional Director (East Asia)
37 South Sathorn, Bangkok
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Wednesday, September 01, 2010